Ọkụ Chicken Leg Wing Rack 14 Ohere igwe anaghị agba nchara Metal Roaster Guzosie na Ntanye Drip maka onye na-ese anwụrụ ma ọ bụ oven, nchekwa efere, enweghị nkwụ, dị mma maka Bbq, picnic
Igwe anaghị agba nchara ghere eghe akwa ụkwụ ụkwụ
Ọkụ Chicken Leg Wing Rack 14 Ohere igwe anaghị agba nchara Metal Roaster Guzosie na Ntanye Drip maka onye na-ese anwụrụ ma ọ bụ oven, nchekwa efere, enweghị nkwụ, dị mma maka Bbq, picnic.
Ngwaọrụ kichin/Ngwaọrụ Anụ Mmịkpọ
Mpempe akwụkwọ mkpanaka igwe anaghị agba nchara Chicken Leg Rack
Ogo ogbe ọkụkọ ụkwụ
Portable/foldable/Easy Iji dị ọcha/waterproof
Ihe dịka 0.61kg
Ebe dị mma
Portable/foldable/Easy Clean/Waterproof/Strong Iburu ikike/adịghị mfe ada/Anti-Scalding Handle
1. Naanị Hang na Hapụ - Echegbula onwe gị maka ịtụgharị ha, ihe a na -etinye ọkụ ọkụ ọkụ nke nwere oghere nwere oghere ga -eme ka ụkwụ gị na nku gị sie nke ọma n'akụkụ niile nke ọma.
2. Nha zuru oke - Ọkụkọ ọkụkọ a dabara nke ọma n'ọkwa nha ọ bụla, igwe ihe na anwụrụ ọkụ. Ọ nwere nha 13.4 sentimita na 6.5 sentimita.
3. Ọ nweghị ọkụ na -adị elu ma na -adịghị ahụ nke ọma na tray drip - jiri pan n'okpuru okpokoro ọkụ ọkụ ọkụ a, enweghị ọkụ na -enwu na ihe niile na -amịkọrọ, nri zuru oke iji mepụta gravy na -atọ ụtọ.
4. Ọ dị mfe ịsacha - enwere ike ịsacha akwa nku ọkụ ọkụ a site na igwe efere efere. Ọ bụrụ na ọ dị mkpa, ị nwekwara ike tinye ya na mmiri na ncha ịsa efere ka ọ dị mfe nhicha. Enwere ike apịaji kọmpat maka nchekwa dị mfe.
5. Ogo siri ike na ịdị adị adị - emere na igwe anaghị agba nchara dị elu, njigide ụkwụ ọkụkọ a maka grill, oven, na anwụrụ ọkụ ga -akwụrịrị oke okpomọkụ maka iji ogologo oge wee nweta ego gị!
Ejiri ihe ọkụkụ ihe ọkụkụ ọkụkọ a na -eme maka ihe igwe anaghị agba nchara dị mma na ọla siri ike iji hụ na ọ nwere ike iguzo oke okpomọkụ. Ọ na-ajụkwa oyi na anaghị emebi emebi ka ị nwee ike iji ya ogologo oge. N'otu oge ahụ, anyị na -ahụ na ọ nweghị nsogbu iji nri.
Mgbe i jichara ya, ị nwere ike tufuo ihe ọkụkọ ọkụkọ a maka ịsa n'ime efere efere na -enweghị agbaji akụkụ ya ọ bụla. Ọ bụrụ na ọ dị mkpa, ị nwere ike tinye ya ncha n'okpuru ncha iji mee ka ihe fọdụrụ n'ọkụ dị nro. Anyị ekwuola na ọ na -apịaji ma enwere ike ịchekwa ya nke ọma? Ee, ewezuga nhicha dị mfe, ọ dịkwa mfe ịchekwa na -enweghị nnukwu oghere.
Nke gara aga: Mbadamba Ihe Ncha maka Ihe nsure ọkụ na -agba ọsọ ngwa ngwa Mbadamba unyi ọkụ ọkụ 35 mm resin Burner Rolls Pack of 120 Coal Briquettes Charcoal Burner Instant Fire Coal Tablet.
Osote: Darkelves Ngwongwo Anụ Mmịkpọ Anụ Mmịkpọ kichin na-ejikọ Clamps Food Clamps Elu dị oke mma igwe anaghị agba nchara na-eji esi nri ihe nkpuchi anụ ọkụkọ.
Igwe anaghị agba nchara Nnu ose ose Grinder Adj ...
Unyi Chimney Starter Nnukwu Osisi Aka ...
Grịl ahịhịa ahịhịa Scraper Extra Strong BBQ Cleaner Sa ...
Eletriki Anwụrụ ọkụ Grills Barbecue Gridd ...